Ny tranonao any an-danitra? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Ny tranonao any an-danitra?
Ao amin'ny hira roa malaza indrindra ao amin'ny filazantsara dia milaza hoe: "Ny trano tsy misy mponina miandry ahy" ary "Ny fananako dia ao ambadiky ny tendrombohitra". Ireo tononkira ireo dia mifototra amin’ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Misy trano maro ao an-tranon’ny raiko. Raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo va Aho hoe: Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho? (Jaona 14,2). Matetika koa ireo andinin-teny ireo no voatonona amin’ny fandevenana, satria mifandray amin’ny fampanantenana fa hanomana valisoa ho an’ny vahoakan’Andriamanitra any an-danitra izay miandry ny olona aorian’ny fahafatesana i Jesosy. Izany ve anefa no tian’i Jesosy holazaina? Tsy mety raha miezaka mampifandray mivantana ny tenin’ny Tompontsika amin’ny fiainantsika isika, nefa tsy miraharaha izay tiany holazaina amin’ireo niresahany tamin’izany fotoana izany.
Ny alina talohan'ny nahafatesany, Jesosy dia niara-nipetraka tamin'ny mpianany tao amin'ny efitrano fanasan'ny Tompo. Taitra ny mpianatra nahita ny zavatra hitany sy reny. Nanasa ny tongony i Jesosy, nanambara fa misy mpamadika eo amin'izy ireo, ary nanambara fa hamadika azy i Petera fa tsy indray mandeha fotsiny fa intelo ihany. Azonao an-tsaina ve ny navalin'izy ireo? «Tsy mety io ny Mesia. Miresaka ny momba ny fijaliana, ny famadihana ary ny fahafatesana izy. Ary nihevitra izahay fa izy no mpisava lalana amin'ny fanjakana vaovao ary hiara-manjaka aminy izahay! » Misafotofoto, famoizam-po, tahotra - fihetseham-po izay mahazatra antsika rehetra. Fiandrasana diso fanantenana. Ary nanisa izany rehetra izany i Jesosy: «Aza matahotra! Matokia ahy! » Te hanangana ny mpianany ara-tsaina izy ao anatin'izao toe-javatra mampivarahontsana izao ary manohy ny teniny: "Misy trano maro ao an-tranon'ny raiko".
Inona anefa no nolazain’ireo teny ireo tamin’ny mpianatra? Ny teny hoe “tranon’ny raiko” — araka ny ampiasana azy ao amin’ny Filazantsara — dia manondro ny tempoly tao Jerosalema (Lio. 2,49, Jaona 2,16). Nosoloin’ny tempoly ny tabernakely, ilay tranolay azo nentina nampiasain’ny Israelita mba hanompoana an’Andriamanitra. Tao anatin’ny tabernakely (avy amin’ny teny latinina hoe tabernaculum = lay, hut) dia nisy efitra iray - nosarahan’ny ridao matevina - izay nantsoina hoe Masina Indrindra. Izany no tranon’Andriamanitra ( “tabernakely” midika hoe “Mishkan” amin’ny teny hebreo = “toerana” na “fonenana”) teo anivon’ny olony. Indray mandeha isan-taona dia natokana ho an’ny mpisoronabe irery ihany no hiditra ao amin’io efitrano io mba hahafantarany ny fanatrehan’Andriamanitra.
Ankoatr'izay, ny teny hoe "tokantrano" na "toerana onenana" dia midika hoe toerana onenan'olona iray, ary "amin'ny teny grika taloha (ny fiteny ao amin'ny Testamenta Vaovao) dia tsy midika hoe toerana maharitra hipetrahana, fa fijanonana amin'ny dia izay mitarika ianao mankany amin'ny toerana hafa ao anatin'ny fotoana maharitra ».  Izany dia midika zavatra hafa ankoatra ny hoe miaraka amin’Andriamanitra any an-danitra aorian’ny fahafatesana; satria ny lanitra dia matetika no heverina ho fonenan'ny olona farany sy farany.
Nilaza izao i Jesosy fa hanomana trano ho an’ny mpianany izy. Aiza no tokony halehany Ny lalany dia tsy tokony hitarika azy mahitsy ho any an-danitra hanorina trano any, fa avy amin’ny Efitrano ambony ka hatrany amin’ny hazo fijaliana. Noho ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty, dia tsy maintsy nanomana toerana ho an’ny azy tao an-tranon-drainy izy4,2). Toy ny hoe: “Efa voafehy ny zava-drehetra. Mety ho toa mahatsiravina ny zavatra hitranga, saingy ao anatin’ny drafitry ny famonjena avokoa izany.” Nampanantena izy avy eo fa ho avy indray. Amin'io toe-javatra io dia toa tsy miresaka momba ny Parousia (Fihaviana fanindroany) izy (na dia miandrandra ny fisehoan'i Kristy amim-boninahitra amin'ny andro farany aza isika), saingy fantatsika fa ny lalan'i Jesosy dia tokony hitarika azy ho eo amin'ny hazo fijaliana ary Izy fa rehefa afaka telo andro dia tsy hiverenan'ny Fahafatesan'ny nitsanganan'ny maty. Niverina indray tamin’ny endriky ny Fanahy Masina izy tamin’ny andro Pentekosta.
“... ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako hianareo” (Jaona 14,3) hoy Jesosy. Andeha isika handinika kely ny teny hoe “ho ahy” ampiasaina eto. Tokony ho takatra amin’ny fomba mitovy amin’ny teny ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona izy ireo 1,1milaza amintsika fa ny Zanaka (ny Teny) dia niaraka tamin’Andriamanitra. Izay miverina amin'ny teny grika hoe "pros", izay mety midika hoe "to" sy "at". Rehefa misafidy ireo teny ireo mba hamaritana ny fifandraisan’ny Ray sy ny Zanaka, ny Fanahy Masina dia manondro ny fifandraisan’izy ireo akaiky. Ao amin’ny fandikan-tenin’ny Baiboly, ireo andininy ireo dia nadika toy izao: “Tamin’ny voalohany ny teny. Tao amin’Andriamanitra ny teny, ary mitovy amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra izany ... »
Mampalahelo fa be loatra ny olona mihevitra an’Andriamanitra any an-danitra ho toy ny olona tokana mijery antsika eny lavitra. Ireo teny toa tsy manjary hoe "amiko" sy "at" dia taratry ny lafiny hafa tanteraka amin'ny maha-Andriamanitra. Izy io dia momba ny fandraisana anjara sy fironana. Mifanatri-tava izany. Izy io dia lalina sy akaiky. Inona anefa no ifandraisan'izany sy aminao anio? Alohan'ny hamaliako an'io fanontaniana io dia avelao aho hamerina hijery vetivety ny tempoly.
Rehefa maty i Jesosy, dia triatra nisasaka ny efitra lamba tao amin’ny tempoly. Ity triatra ity dia maneho ny fidirana vaovao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, izay nisokatra niaraka tamin'izany. Tsy tranony intsony ny tempoly. Nanomboka izao dia nisokatra ho an'ny olona tsirairay ny fifandraisana vaovao tanteraka amin'Andriamanitra. Ao amin’ny fandikan-tenin’ny Baiboly Vaovao Mahafaly no vakintsika ao amin’ny andininy faha-2 manao hoe: “Misy trano maro ao an-tranon’ny raiko” Tao amin’ny Masina Indrindra dia tsy nisy afa-tsy toerana ho an’ny olona iray, fa ankehitriny dia nisy fiovana lehibe. Eny tokoa, Andriamanitra dia nanome toerana ho an’ny olona rehetra tao an-tranony! Natao izany satria tonga nofo ny Zanaka ka nanavotra antsika tamin’ny fahafatesana sy ny hery manimban’ny ota, niverina tany amin’ny Ray, ary nitarika ny olombelona rehetra ho eo anatrehan’Andriamanitra (Jaona 1 Kor.2,32). Hoy i Jesosy tamin’io takariva io: “Izay tia Ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny raiko ho tia azy, dia hankao aminy izahay ka handry ao aminy » (Jaona 14,23). Toy ny eo amin’ny andininy faha-2, dia miresaka momba ny “trano fonenana” isika. Hitanao ve ny dikan'izany?
Inona no hevitra ifandraisanao amin'ny trano tsara? Angamba: fiadanan-tsaina, milamina, fifaliana, fiarovana, torolalana, famelan-keloka, fitandremana, fitiavana tsy misy fepetra, fanekena ary fanantenana, mba hiresaka afa-tsy vitsivitsy. Na izany aza dia tsy tonga teto an-tany fotsiny Jesosy mba haka fahafatesana ho antsika, fa mba hiara-mizara amin'ireo hevitra rehetra mifandraika amin'ny trano tsara ity ihany ary mba hahafahantsika miaina ny fiainana niarahan'izy sy ny rainy taminy Ny Fanahy Masina mitarika.
Io fifandraisana tsy azo inoana, tsy manam-paharoa ary akaiky io, izay nafatotr’i Jesosy irery tamin’ny Rainy, dia misokatra ho antsika koa izao: “mba ho eo amin’izay itoerako ianareo”, hoy ny andininy ao amin’ny andininy. 3. Ary aiza i Jesosy? “Amin’ny fiombonana akaiky indrindra amin’ny Ray” (Jaona 1,18, Baiboly Vaovao Tsara) na, araka ny iantsoana azy amin’ny fandikan-teny sasany: “ao an-tratran’ny ray”. Hoy ny mpahay siansa iray: “Ny hoe miala sasatra eo am-pofoan’ny olona iray dia midika hoe mandry eo an-tsandriny, ho sarobidy aminy ho toy ny tanjon’ny fifantohana lalina indrindra sy ny firaiketam-po tafahoatra, na, araka ny iantsoana azy amin’ny fomba kanto, ny ho tratrany. namana."  Teo no misy an’i Jesosy. Ary aiza isika izao? Mandray anjara amin’ny fanjakan’i Jesosy isika (Efesiana 2,6)!
Ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy mahakivy ary mahakivy izao? Matokia fa ny tenin'i Jesosy dia mampionona anao. Tahaka ny naniriany namporisika sy nampahery ary nanatanjaka ny mpianany dia toy izany aminao koa: «Aza matahotra! Matokia ahy! » Aza avela hanimba anao ny ahiahinao, fa miantehitra amin'i Jesosy ary mieritreritra momba izay lazainy - ary inona no navelany tsy mendrika -! Tsy nolazainy fotsiny fa mila sahy izy ireo ary hivadika daholo ny zava-drehetra. Tsy manome antoka anao dingana efatra ho amin'ny fahasambarana sy ny fanambinana izany. Tsy mampanantena izy fa homeny anao any an-danitra izay afaka entinao rehefa maty ianao - ary noho izany dia mendrika ny alahelonao rehetra. Fa kosa, nohazavainy mazava fa nijaly ny fahafatesan'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotantsika rehetra, ny hahatody azy ho azy eo amin'ny hazo fijaliana, mba hahafahana manavotra izay rehetra mahasaraka antsika amin'Andriamanitra sy fiainana ao an-tranony.
Tsy izay ihany anefa. Ianao dia mandray anjara am-pitiavana amin'ny fiainam-pifandraisan'Andriamanitra mba hahafahanao mizara mifanatrika am-pifandraisana akaiky amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina - eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tiany ho isanisany ianao ary izay rehetra ijoroany ankehitriny. Hoy izy: "Izaho no namorona anao, mba honina ao amin'ny tranoko."
Ry Ray rehetra ô, manolotra ny fisaoranay sy ny fiderana anao izahay, izay tonga nitsena anay tamin'ny zanakao lahy raha mbola nisaraka izahay ka nitondra anay nody! Tamin'ny fahafatesana sy ny fiainana dia nambarany ny fitiavanao anay, nomeny fahasoavana izahay ary nanokatra ny varavarana hanome voninahitra ho antsika. Enga anie isika izay mizara ao amin'ny vatan'i Kristy hitarika ny fiainany atsangana; isika izay misotro amin'ny kapoakany dia manefa ny ain'ny hafa; isika izay nohazavain'ny Fanahy Masina dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tazomy amin'ny fanantenana fa nampanantena anay ianao fa afaka izahay sy ny zanatsika rehetra ary hidera ny anaranao ny tany manontolo - amin'ny alàlan'i Kristy Tompontsika. Amena 
 NT Wright, Gaga ny fanantenana, p. 150.
 Rick Renner, Miakanjo hamono (Lohateny Ger.: Mirongo fiadiana), p. 445; voatonona eto amin'ny Good News Bible.
 Edward Robinson, Diksionera Grika sy Anglisy ao amin’ny NT (Alemà: Diksionera Grika-Anglisy an’ny Testamenta Vaovao), p. 452.
 Vavaka aorian'ny kômonio masina araky ny Eucharistic Liturgy of the Scottish Episcopal Church, nalaina avy tao amin'ny Michael Jinkins, Invitation to Theology, p. 137.